Owensboro, KY • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fikosoham-batana any Owensboro, KY.
Owensboro dia tanàna any an-trano sy any amin'ny fanjakan'ny Daviess County, Kentucky, Etazonia. Io no tanàna fahefatra lehibe indrindra amin'ny fanjakana araka ny isan'ny mponina. Owensboro dia miorina amin'ny US Route 60 sy Interstate 165 eo amin'ny 107 km atsimo andrefan'ny Louisville, ary izy no tanàna lehibe indrindra amin'ny faritry ny tanànan'i Owensboro. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary fikosoham-batana any Owensboro, KY.